ဗုဒ္ဓဘာသာကို “ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး” ဘာသာတရားတရားအဖြစ် ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ဗုဒ္ဓဘာသာကို “ကမ္ဘာ့ အကောင်းဆုံး” ဘာသာတရားတရားအဖြစ် ဆုရွေးချယ်ချီးမြှင့်
Posted by ဆိုးဆိုး on Aug 14, 2010 in Creative Writing, History |9comments
အဆိုပါ အထူးတစ်လည်ချီးမြှင့်ခဲ့တဲ့ဆုကို ကမ္ဘာ့ဘာသာပေါင်းစုံမှ ကိုယ်စားလှယ် ၂၀၀
ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အများစုက အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းတွင်အဖွဲ့ခွဲဝင်
အနည်းဆုံးဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာကို မိမိတို့ ဘာသာထက်ကျော်လွန်ပြီး ဆန္ဒမဲပေးခဲ့
အဆိုပါအဖွဲ့ကြီး၏သုတေသနညွန်ကြားရေးမှူး Jonna Hult က ” ဒီကမ္ဘာ့အမွန်မြတ်ဆုံး၊ အကောင်းဆုံး ဘာသာတရားဆုကို ဗုဒ္ဓဘာသာက
ရရှိတာအံ့သြစရာမရှိပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လည်း ဆိုတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ
ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့် ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ စစ်ပွဲဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။
တစ်ခြားဘာသာများနဲ့ မတူတာကအဲဒါပါပဲ။ တစ်ခြားဘာသာတွေက အကယ်၍ဘုရားသခင်သာ
မှားယွင်းခဲ့ယင်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ လက်နက်တွေကို အရံသင့် ထားကြပါတယ်။
အတော်ခဲယဉ်းပါတယ်။ တစ်ခြားဘာသာဝင်တွေရဲ့ အစဉ်အလာအလေ့အထနဲ့ ဆန့်ကျင်စွာပဲ
ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံတဲ့ တရားကိုသာသူများကို
Belfast မြို့မှ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီး Ted O’Shaunghnessy ကတော့ ကက်သလစ်သာသနာကို မြတ်နိုးကိုကွယ်ပေမယ့် လူသားတွေကိုမေတ္တာဂရုဏာထားရန် ဟောကြားပြီး
လူသားတွေကိုပဲ သတ်ဖြတ်ကာ ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုဆန္ဒ နားလည်ပါတယ်လို့ ပြောကြတာက
စိတ်အနှောက်အယှက်အဖြစ်ရဆုံးပါပဲ။ ဒါကြောင့် မွန်မြတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာကို မဲပေးခဲ့တာပါလို့ အမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပါကစ္စတန်က မွတ်ဆလင်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် Tal Bin Wassad ကလည်းဒီအဆိုကိုသဘောတူထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအဖွဲ့ကြီးရဲ့
အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ သူက “ကျွန်တော်ဟာ
အစ္စလာမ်ဘာသာကိုနှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်သူတစ်ယောက်ပါ။ သို့သော်လည်း
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ခံစားချက်ထက် ဘာသာရေးကို အကြောင်းပြပြီး
အစ္စရေးနိုင်ငံ ဂျေရုဆလင်မြို့က ဂျူးဘုန်းတော်ကြီး Shmuel Wasserstein ကတော့ “ကျွန်တော်လဲ ကျွန်တော့်ဘာသာဖြစ်တဲ့ ဂျူဒါအစ်ဇင် ကိုနှစ်သက်မြတ်နိုးပါတယ်။
သို့သော် စိတ်မကောင်းစရာ အချက်တစ်ခုက အဆိုပါအဖွဲ့ကြီးအနေဖြင့် ထိုဆုကိုလက်ခံမည့်သူတစ်ယောက်ကိုမျှ မတွေ့ခဲ့ရပေ။ သူတို့
ဆက်သွယ်ပြောဆိုသမျှ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အားလုံး ကထိုဆုကိုလက်ခံဖို့ ငြင်းပယ်
အဘယ်ကြောင့် ထိုဆုကိုလက်ခံရန် ငြင်းဆန်ရကြောင်းမေးမြန်ခဲ့ရာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာအသင်း ဘုန်းတော်ကြီး ဂုရတ္တက “ယခုလိုမိမိတို့ဘာသာကို
အသိအမှတ်ပြုချီးမြှင့်သည့်အတွက် ၀မ်းမြောက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ သို့သော်
ဒီဆုကို အမြတ်ဆုံး လွတ်မြောက်မှုနိက္ခမဓါတ်၊နိဗ္ဗာနဓါတ်
ကြိုးစားအားထုတ်ကာရရှိနိုင်သည့် လူသား အားလုံးကို မိမိတို့
မှတ်ချက်။ ။ ချောကလပ်မြို့တောမှ သူငယ်ချင်း မြို့စားလေး မေးလ်မှ
အခုဇတ်လမ်းက အောက်က ၀က်ဘ်ပေ့ဂ်ျက စခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။
အဲဒီထဲက (ICARUS)ဆိုတာ တကယ်မရှိပါတဲ့။
ဒီသတင်းစဖတ်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ ကျုပ်လည်း ထပဲခုန်ရမလိုပေါ့။ အဲဒါနဲ့ အင်တာနက်ကြီးထဲလိုက်နှိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။
မြတ်စွာဘုရားက ကာလမသုတ်မှာ ပြောထားတယ်လေ..။
“သင်တို့သည်ပြောသံ ကြားကာမျှဖြင့် (ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည်) မယူကုန်လင့်ဦး၊
ငါတို့လေးစားသော ရဟန်း၏ စကားဟူ၍လည်း (ဟုတ်ပြီ မှန်ပြီဟု အတည်) မယူ ကုန် လင့်ဦး။”
အဲဒါနဲ့ အမှန်ကို သိတော့တာပါ။
ဆိုတော့…အင်း…သတင်းက …ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ လို့ပဲ ပြောရတော့မှာပဲ..၊
အောက်ကနောက်တခုက…အဲဒါကို သုံးသပ်ထားတာပါ။ ဖတ်ကြည့်ပေါ့။
Peace between countries and communities doesn’t have much ofaplace in religion. Onalark, I went to the online Bible at BibleGateway.com and didakeyword search on the word peace. I came up with 247 passages. I didn’t read them all but the ones I read were mostly along the line of “peace be with you” and “go in peace.” There was nothing about peace between countries or being peaceful to the people in the next town.
I did another search on the word “war” and the good news is there were only 137 entries!
Yes, Buddhism is the religion of forgiveness, loving kindness, empathy and compassion. More people in the modern stressful world now seek the nature of peace by practising insight meditation. The religion is flexible and tolerant that one does not need to beaBuddhist to practice meditation. I agree with the award given to this great religion.
I ponder _ _ _ _
Our military leaders are saying that they are devout Buddhists and yet they kill the Monks, create the Karen Buddhist army to divide and rule the ethnic Karen and incredible thing recently was for Than Shwe to visit Buddha Gaya thinking that he could wash away his bad karma by it. The junta does not practice what they preach. They are sinking so deep in the greed and mad power that losing the status of human being is obvious according to what they are practising. They have absolutely reached the low levelled devil lives aiming for eternal lives in Awisi. It is understandable for junta being able to harm the Buddhism systematically without realising themselves the bad karma they are collecting. The beings in devil lives could not know the consequence of their action. We knew that by getting the valuable human life, we can practice vipassana meditation to attain enlightenment. Our ancestors teach us about the value of beingahuman and to use this life intelligently to reach Nirvana. Sadly the generals in the deep water of Devil mode can no way avoid reaching the lowest level of Awisi. They are not human beings. They can no way be the Buddhists at all.
ဒီရွာထဲ.. သတင်းမှားကို ထပ်ခါထပ်ခါတင်ကြရင်း..နောင်လေးငါးဆယ်နှစ်ရောက်တော့.. အမှန်ကြီးလို့ထင်ကုန်ကြမှာစိုးပါတယ်..
ဘယ်သူမဆို.. ကိုယ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာကို ထိပ်တန်းရောက်ချင်..အကောင်းဆုံးဖြစ်ချင်တာ..သဘာဝပါ..
သဂျီးကိုးကွယ်တဲ့ မွတ်စလင်ဘာသာအကြောင်းလည်း ပြောပါအုံး… ။
သူတို့လည်း.. သူတို့အတိုင်းအတာနဲ့.. ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးများဖြစ်ကြကြောင်း..
Happy news! Ramadan has been announced in INDIA. 21 July 2012 is the first day of fasting.We pray Allah makes this month blessed for us all, and enables us …
Islam – The best religion in the world
Islam – The best religion in the world is on Facebook. To connect with Islam – The best religion in the world, sign up for Facebook today. Sign UpLog In ..
သြော် ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။
ဂျီးက မာမူဂျီးပါ တားတား တိပါတယ် ခိခိ
မွတ်ဆလိမ် ဘာသာ အကောင်းဆုံး သဂျီး ယူဆပါရင်
အများသိအောင် ဘာဘာညာညာ လုပ်ပေးပါလား
ကျနော်တို့လဲ ဗဟုငှက်တ ရသပေါ့ဗျ ။
ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြေညာကြဖို့ ဘယ်နှစ်ဘာသာ ကျန်သေးပါလိမ့်